आज मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुँदै, दौरा सिलाउन कस–कसलाई फोन आयो ? « Ok Janata Newsportal
आज मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुँदै, दौरा सिलाउन कस–कसलाई फोन आयो ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्दैछन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र माओवादी केन्द्रले मन्त्री बन्नेको टुंगो लगाएकोले देउवाले आज मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्न लागेका हुन् ।
आइतबार पनि मन्त्रिमण्डल बिस्तारका लागि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो । सरकार निर्माण भएको लामो समयपछि पनि मन्त्रिमण्डल बिस्तार नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना भइरहेको छ ।
यता, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले आज बेलुकासम्म सरकार विस्तार हुने बताएका छन् । नेता विश्वकर्माले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा सत्तासाझेदार दलबीच सहमति भइसकेको बताउँदै आज सरकार विस्तार हुने बताएका हुन् ।
उनले भने– दलहरुबीच सहमति भइसकेको छ । आज साँझसम्ममा सरकारले पूर्णता पाउने सम्भावना छ । नेता विश्वकर्माले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि सरकारका सहभागी हुनेछ ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का नेता कर्ण थापाले आफ्नो पार्टी फुटाउन सघाएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसको चर्को आलोचना गरे ।
उनले भने– सभामुखले नगर्नुपर्ने काम गरेका छन् । त्यसविरुद्ध आगामी दिनमा संसद चल्न नदिने अवस्था आउन सक्छ । मन्त्रीको सपथका निम्ति निश्चित सांसदलाई फोन भइसकेको स्रोत बताउँछ ।